Imiraadka arabta oo la kaashanaya Shiinaha ammaanka maraakiibta Badaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Imiraadka arabta oo la kaashanaya Shiinaha ammaanka maraakiibta Badaha
Amiirka amniga ee Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ayaa Isniintii sheegay in Imaaraadka Carabtu ay doonayso xorriyadda iyo ammaanka maraakiibta caalamiga ah ee gobolka Gulf iyo Bariga Dhexe.
Waxa uu carabka ku adkeeyay Al Nahyan, oo socdaal rasmi ah u Shiinaha on muhiimadda ay leedahay iskaashiga Shiinaha iyo dalal kale oo saaxiibtinimo si ay u gaaraan amniga ee navigation, iyo in la xaqiijiyo socodka ammaan ah oo sahay saliidda dunida, kaas oo wakiil muhiimadda weyn xasiloonida ee dhaqaalaha caalamiga ah iyo waxa aan la bandhigi wax khatar ah ama handadaad.
Dhinaca kale, waxa tilmaamay in UAE ay had iyo jeer raadinaya doorka actor a Shiinaha ee ay ku abuureen nabad ee gobolka Bariga Dhexe, iyo in wax laga qabto ilaha khatar iyo hanjabaad, ku tilmaamayaa in ay isku raacsan iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal si ay lid ah xagjirnimada iyo argagaxisada iyo ciidamada taageeraya, isagoo halista ugu weyn ee ammaanka dunida, xasiloonida iyo horumarka.
Guryaha Emaar ayaa heshiis la saxiixday Daxing Caalamiga ah ee Daxing ee Beijing si ay u hirgaliso mashruuc $ 11 bilyan ah oo ku lug leh dhisidda goobo degaan iyo goobo madadaalo ah.
Previous articleMasaajid La Dhisay 2 Sano Kaddib Geeridii Nebi Muxamed (SCW) Ayaa Laga Helay Dhulka Ay Israa’iil Haysato
Next articleMohammed bin Zayed stresses the importance of cooperation with China to ensure a safe flow of oil supplies